Blur Marketing Exchange: Ẹtop, Chọta, igbu | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 3, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ezie na okwu ọnụ ahịa emewo azụmahịa anyị budata, anyị na-eme ihe n'eziokwu kechioma nwere ndị dị otú ahụ ịrịba ahịa ndị na-aga n'ụzọ ha ịkọrọ anyị ịga nke ọma. Na ụzọ anyị, agbanyeghị, anyị agbaala mbọ ịchọta ihe anyị nwere ike iji site n'oge ruo n'oge na usoro dị iche iche. O siri ike iso ụlọ ọrụ ọzọ na-emekọrịta ihe naanị iji mee ka ha daa ọgụ, na-ahapụ ka anyị bulie iberibe maka onye ahịa anyị.
Ìsì Group kere ihe mgbanwe n'ịntanetị ijikọ akụrụngwa na ụlọ ọrụ. Site na interface ha, ịnwere ike biputere ohere ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ… ma ọ bụ zaghachi ma nye ohere ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa.
Nke a abụghị asọmpi: ọ bụ ụzọ ọhụrụ iji kpoo azụmahịa ọhụrụ gị ma anyị na-ekwe ka ndị ọkachamara nwere ahụmịhe gosipụtara wee sonye, ​​Enweghị ọrụ ịkọwapụta: ị ga-agbanye n'otu ụzọ ị ga-esi nweta ohere ọhụụ ọhụụ.
M hụrụ n'anya mmemme dị ka nke a, Elance, 99 Designs na ọrụ ndị ọzọ na-enye ohere maka ọkà ụlọ ọrụ na freelancers ịchọta. Ọ bụghị ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ego azụmaahịa ma ọ bụ ihe onwunwe iji nweta okwu ahụ. Mgbanwe ntanetị dị ka nke a nwere ike ịbụ naanị ihe ịchọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị onyinye ahụ.
Usoro a nwere ihe karịrị ndị ọkachamara 20,000 na-echere gị pyịta ndu mkpụkpu unu!
Tags: blurblur ahịaigwe mmaduejechi akwụkwọmgbanwe ahịaire ere ahịaahia pitch